Orinasa sy mpamatsy biriky China Ice Brick | Huizhou
Ny biriky ranomandry Huizhou dia namboarina ho an'ny fivarotam-panafody vaovao sy ny zava-mahadomelina bio ary koa ireo entana mora tohina amin'ny hafanana mandritra ny fandefasana rojony mangatsiaka. Ampiharina izy ireo mba hitazomana ny maripana manodidina ao anaty fonosana iray mangatsiaka hatrany mandritra ny fifindrana amin'ny alàlan'ny famindrana rivotra mafana.
1.Ny biriky Ice Huizhou dia namboarina ho an'ny fivarotam-panafody sy bio ary koa ireo entana marefo amin'ny hafanana hafa mandritra ny fandefasana rojony mangatsiaka. Ampiharina izy ireo mba hitazomana ny maripana manodidina ao anaty fonosana iray mangatsiaka hatrany mandritra ny fifindrana amin'ny alàlan'ny famindrana rivotra mafana.
2.Ny Ice Brick dia antsoina koa hoe vata fampangatsiahana ranomandry, tavoahangin-dranomandry, vongan-dranomandry na fonosana ranomandry PCM any amin'ny firenena samy hafa. Izy ireo koa dia mpamatsy hatsiaka hafa ho an'ny fonosana ranomandry mahazatra antsika miaraka amin'ny asany mitovy amin'izany. ara-nofo, ny iray kitapo mahia ary ny iray kosa biriky matevina mateza tsara endrika, ary mazàna ny biriky ranomandry dia afaka mitazona atiny maro ao anatiny izay mahatonga ny hatsiaka haharitra kokoa.
3. Ny biriky ranomandry dia vita avy amin'ny fitaovana fanovana dingana (PCM) ho toy ny vata fampangatsiahana anaty sy boaty HDPE ivelany. Miaraka amin'ny traikefa an-taonany maro amin'ny fifehezana ny mari-pana amin'ny hatsiaka mangatsiaka, novolavolaina tsara ho an'ny fifehezana ny mari-pana tsara kokoa, ny kalitao avo kokoa ary ny fiheverana avo kokoa ny Ice Brick-nay. ho an'ny fampiasana tranokala ho an'ny mpanjifa.
4.Ireo dia ampiasaina amin'ny entana matetika fandefasana sy fandefasana miaraka amina kitapo mangatsiaka na boaty mangatsiaka kokoa.
5.Ny haben'ny biriky sy ny hateviny ary ny mari-pana PCM anatiny dia azo namboarina ho an'ny toe-javatra samihafa.
1.Huizhou Ice Brick dia namboarina mba hitondrana ny hatsiaka manodidina azy, amin'ny alàlan'ny fifanakalozana rivotra mangatsiaka sy mafana na conduction.
2. Ho an'ny sehatry ny sakafo vaovao, matetika izy ireo dia miaraka amina boaty mangatsiaka kokoa ho an'ny fitaterana vokatra vaovao, mora simba ary mahamay, toy ny: hena, hazan-dranomasina, voankazo sy legioma, sakafo voaomana, sakafo mangatsiaka, gilasy, sôkôla, vatomamy, cookies , mofomamy, fromazy, voninkazo, ronono, sns.
3. Ho an'ny sehatry ny fivarotam-panafody, ny biriky ranomandry dia matetika ampiasaina miaraka amin'ny boaty mangatsiatsiaka fanafody mba hitazomana ny mari-pana marin-toerana ilaina amin'ny fandefasana reagent biokimika, santionany ara-pitsaboana, zava-mahadomelina, plasma, vaksinina, sns.
4. Ary izy ireo koa dia tsara ho an'ny fampiasana ivelany raha toa ka asio ao anaty kitapo fisakafoanana ny biriky ranomandry, kitapo mangatsiaka kokoa mba hitazomana ny sakafo na zava-pisotro mangatsiaka rehefa mitsangatsangana, mitoby, piknik, mandeha sambo ary manjono.
5. Ho fanampin'izay, raha apetraka ao anaty vata fampangatsiahana ny biriky ranomandry mangatsiaka, afaka mamonjy herinaratra na mamoaka sery ihany koa izy ary mitazona ny vata fampangatsiahana amin'ny hafanana mangatsiaka rehefa maty.
Lanja（g） Size(CM) Fitaovana biriky Temperature-fiovan'ny toetr'andro
Fanamarihana: ny habe, ny endriny ary ny hateviny dia azo alamina.
1.Non-poizina (Ny akora anatiny indrindra dia rano, polymer avo, sns.) Ary izy ireo dia andrana amin'ny fomba ofisialy Tatitra fanapoizinana am-bava mahery vaika. Azafady mba ho azo antoka ny fampiasana
2.Natao tamin'ny mari-pahaizana Sakafo, maharitra, tsy azo lavina HDPE ivelany fitaovana ary Eco namana hihena gel gel, Huizhou Ice Brick dia azo ampiasaina alohan'ny datin'ny fahataperany.
3. Raha ampitahaina amin'ny fonosana gilasy, ny biriky Ice dia manana habe lehibe kokoa izay afaka mitahiry angovo mangatsiaka bebe kokoa amin'ny fampiasana lava kokoa ary amin'ny endrika voafintina tsara izay mampiseho madio sy milamina ary mahatsapa kalitao avo lenta.
4. Safidy namboarina azo alaina avy amin'ny fitaovana anatiny mankany amin'ny endrika biriky ivelany, habe na hateviny.
5.Ny biriky fitaratra misy anay dia tsy voaporitra, mafy ary mora be amin'ny fanadiovana isan'andro mba hamelombelona azy ireo handeha tsara amin'ny vokatrao.
1.Mba hiantohana ny fahombiazana tsara indrindra hitondrana hatsiaka, azafady mba alao antoka fa voafafa tanteraka ao anaty vata fampangatsiahana, frizera na trano fampangatsiahana izy ireo alohan'ny hampiasana azy.
2. Matetika ny mari-pana napetraka ho an'ny vata fampangatsiahana, ny vata fampangatsiahana na ny trano fampangatsiahana mangatsiaka dia 10 ° C ambany noho ny PCM ao anatiny.
3.Ny biriky ranomandry dia azo ampiasaina miverimberina alohan'ny datin'ny fahataperany.
4. Izy ireo dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny fandefasana lavitra na fanaterana sakafo vaovao sy fanafody.
Teo aloha: Kitapo mangatsiaka eo noho eo
Manaraka: Kitapo ranomandry maina hydrate